ဘ ဘာ ဘား ဘိ ဘီ ဘီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘ ဘာ ဘား ဘိ ဘီ ဘီး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 10, 2013 in Creative Writing | 17 comments
ဘယ်တော့မှ မဆက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ရှေ့ဆုံးက လာလာဦးနေရတာ မောလိုက်ထာ။
ဒီနေရာလည်း နေရာအူး နဲ့ ..
နာ့ မမဂျီးနဲ့ဒေါ့ ခက်ဘီ …
အို .. ဘိုပဲဖစ်ဖစ်ဘာ …
ပဆုံး လာနေရာအူးသွားတဲ့ မမဂျီးကို ကျေးဇူးဘာ … လို့ ..
ဘ ဘာ ဘား ဘိ ဘီ ဘီး >> double !!!!
ဘပု တယောက် ဒီနေ့ ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ ဘာဂျာလေး ကောက်ကိုင်ပီး ဘားမှာ ထိုင်မှုတ်နေလေရဲ့ မှုတ်နေတဲ့ ဘိက နားထောင်ကောင်းတာမို့ ဘော်ဒါတွေ ဘီယာ ၀ိုင်းတိုက်ကြတာပေါ့ ….. ကံဆိုးချင်တော့ မူးနေတဲ့ ဘီးကျဲ တဘွေက ………
ဘပုကို ဘာမပြော ညာမပြော ဘလိုင်းဂျီး ဘားမှာ ဗျင်းလိုက်တာ ဘေးက ဘော်ဒါတွေ မနည်းဝိုင်းဆွဲရတယ် နောက်မှ သိတာက အဲ့ဘဲက ဘပုနဲ့ ဘိတခုမှာ ဘုချင်တာ တူနေလို့ ငြိဖူးသတဲ့ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘီယာဘားလေးမှာ ဘရုတ်ဘရက် ဖြစ်သွားတာတော့ အမှန်
အဲ့ဘီးကျဲ အံဈာဒုံး မကောင်းဘူး ဗျာေxာဘဲ
ဗျစ် ဗျစ် ဗတစ် ဗတစ်
ေxာဘဲ လို့ ဆဲတွားဒယ် ……။
ဘွ ဘွာ ဘွတ်
ဘီအီးတွေ ဘရန်ဒီတွေ ဘလက်လေဘယ်တွေဝေးလို့…
ဘာမှန်းမသိပဲ “ဖွက်ထားတဲ့ ပုလင်းပြား” နဲ့…
“ကျုပ် အိမ်ပေါ်က ဆင်းတယ်” ဆိုတော့…
ဟုတ်ဒါဒွေ မပေါဘာနဲ့ …
အိုက်ဒီ ဘရန်ဒီဒွေ ဘာဒွေကို …
ဒဂယ့် ချာကြီးတွေဆီ ကွင်းဆင်း လေ့လာပီးမှ ရေးဂဲ့ဒါနော့ ..
ဘိုးတော်တွေ ဖင်တုံးလုံးတွေနဲ့ ပြေးရောကလား
နာလည်း…. ဘလက်လေဘယ်လေးရဲ့တန်ခိုးကြောင့်..ရီဝေေ၀ ဖျစ်နေတယ်။။။
“ဘူ” လို့ မထွက်ဘဲ “ရှူး” ဆိုပြီး တိုးတိုးလေး ထွက်သွားတဲ့ အကြောင်းပြချက် ခိုင်မာလို့ လွတ်စေ….
“ဝူးခနဲ” အသံတစ်ခုဟာ ဘေးနားကနေ အဝေးသို့ ထွက်ခွာသွားတော့ “ဗွမ်း´´ ကနဲ အသံတစ်ခုနဲ့ အတူ “ဖြန်း´´ ကနဲ့ ရေတွေဖွာလို့ ရင်ကော့ဖင်ပစ် ခြေအစုံလစ်ကာ ဆက်လျှောက်လိုက် “ဘိုင်း´´ ကနဲ ဆိုသောအသံတစ်ခုနဲ့အတူ ရီဝေရီဝေကာ မျက်လုံးလေးဝှေ့အကြည့်မှာဘဲ ……….. ( နိုးထသောအခါ ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ် ခုတော့ သူအိပ်နေတယ် )
ဘာစိတ်တွေပေါက်ပြီး ဘာဦးနှောက်နဲ့ ဘယ်လိုဒွေရေးထားလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိဘူး…
နီးပါပြီ တစ်သိန်း တစ်သိန်း
ကျုပ်က ဒီလအတွက် ရေးစရာရှာနေတာ
ဘာဒွေ ရေးမို့ဒုန်း …
ခညားဂျီး ရေးမှာဆိုဒေါ့ ခပ်လန့်လန့်ရယ် …
ဘာပဲ ဖစ်ဖစ်ပါလေ …
လဘက်ရည်ဒေါ့ သောက်ရချည်သေးရဲ့ .. ဟီဟိ ..
ဘုမရဲ့အဘရေးတဲ့ “ဘာဘာဘာမှအဘိဘူး” ကိုဝင်ဖတ်မိတာ
ဘိကို ဘောက်ပြောနဲ့ကွယ်….ဘွတ်စရာမရှိ ဗွက်ပေါက်ကုန်မှာ…